संस्कारसहितको व्यवहारीक शिक्षा सिकाउने उदाहरणीय नाम्स ! - Shiksha Sansar
संस्कारसहितको व्यवहारीक शिक्षा सिकाउने उदाहरणीय नाम्स !
प्रकाशित मिति: १४ चैत्र २०७५, बिहीबार March 28, 2019
टोखा नगरपालिका– ९ गोङ्गबुमा २०५७ मा स्थापित नेसनल मोडल साईन्स स्कुल (द नाम्स) ले देशका अग्रणी र अब्बल संस्थाहरुमा आफू पनि रहेको सावित गर्दै आएको छ । लैनचौर स्थित देशकै पहिलो निष्ट कलेजसँग सहकार्य गरेको नाम्सले आफ्ना विद्यार्थीलाई चौतर्फी विकासमा लगाउँदै आईरहेको छ । नाम्सले व्यवहारीक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक गतिवीधीलाई अघि बढाएको छ ।
सानै उमेरबाट नेतृत्व विकास क्षमतालाई प्रष्फुटन गर्ने उद्देश्यले नाम्सले कक्षा नौ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारि दिएको छ । कुशल नेतृत्व, जुझारु युवा टिमले भरिएको नाम्सले शैक्षिक गुणस्तरमा कँहि कतै पनि आफुलाई चुक्न दिएको छैन । २०७४ को एसईई परिक्षामा नाम्सकी छात्रा आरध्या ज्ञवालीले जीपीए ४।० ल्याएर गुणस्तरिय शिक्षाको प्रमाण पेश गरिन् ।
उत्कृष्ट नतिजा, व्यवहारिक शिक्षा, संस्कार र नैतिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने यस विद्यालयले देशका नाम चलेका अन्य विद्यालयहरुमा भन्दा फरक रहेको प्रमाणित गरेको छ । शैक्षिक गुणस्तर सँगसँगै व्यवस्थापकिय पक्षलाई पनि कुशल ढंगले अगाडि बढाउदै आइरहेको छ । कार्य योजना तय गर्दे हरेक कक्षामा सीमित विद्यार्थी राखि उत्कृष्ट नतिजालाई निरन्तरता दिने दिर्घकालिन शैक्षिक कार्ययोजना तय गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
निष्ट कलेजका प्रधानाध्यापक डा। माधव प्रसाद बराल संरक्षक रहेको नाम्सको विद्यालय व्यवस्थापन समितीको अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक प्रदिप भुसाल रहनुभएको छ । दक्ष तथा कर्मठ युवा टिमले चलाएको नाम्समा कडा अनुशासनमा संस्कार सहितको व्यवहारिक शिक्षा दिदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गा प्रसाद न्यौपानेले बताए ।
टोखा नगरपालिकाका विद्यालयहरुमा पहिलोे बाल क्लब आफ्नै विद्यालयले गठन गरेको नाम्सका प्रधानाध्यापक न्यौपानेले वताए । पर्याप्त खेल मैदान, बगैँचा र ‘मिनी जु’ का साथसाथै शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा अध्यापन गराउदै आएको यस विद्यालय बाल मैत्री शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै आईरहेको नाम्स बाल क्लवका अध्यक्ष समिक अधिकारीले बताए । विद्यार्थीहरुले आफ्ना अभिभाबकलाई दर्शन (ढोग) गरेर विद्यालय आउने गरेका छन् ।
सो विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत नेहा पौडेलका अनुसार विद्यालयले व्यवहारीक शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि लगेको वताइन् । उनले भनीन्, ‘विद्यालयले हामिले कीतावको कोरा ज्ञान भन्दा पनि नैतिक, व्यवहारीक र प्रयोगात्मक शिक्षासंग जोडेर हामीलाई जिवन उपयोगी ज्ञान दिइरहेको छ । ’ पौडेल सर्वोत्कृष्ठ विद्यार्थीका रुपमा यस वर्ष सम्मानीत भएकी थिइन् ।
शैक्षिक वाावरण र शिक्षण शिकाई प्रक्रियालाई महत्वपूर्ण स्थान दिदै आएको नाम्सले कक्षा नर्सरि देखि यूकेजिसम्म सिपिएस ‘कम्पिलिट प्रि स्कुल सिस्टम’ र कक्षा एक देखि तिन सम्म सिपिआरएस ‘कम्पिलिट प्राईमेरि स्कुल सिस्टम ’अन्र्तगतको पाठ्यक्रम मार्फत प्रयोगात्मक ढङ्गबाट अध्यापन गराउंदै आएको छ । श्रव्यदृश्य प्रविधिको प्रयोग गरि देशका र अन्य देशका विद्यालयसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिँदै आएको छ ।
अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको पनि नाम्सले विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा सहभागि गराउँदै आएको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक शुलभ शर्मा रिजालले बताए । नाम्सले गत २,३,४ फागुनमा द नाम्स फेस्टीभल अन्तर्गत विज्ञान प्रदर्शनि लगायतका कार्यक्रम गरी विद्यार्थीको प्रतिभा अभिभाबक र समुदाय सामु प्रस्तुत गरेको थियो ।
वार्षीक ३२ घण्टा सामाजिक कार्यमा सहभागी गराउने नाम्सले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीलाई देशका ग्रामिण क्षेत्रमा लगि त्यस स्थानका भौतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासीक, धार्मिक तथा सामाजिक पक्षहरुको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार पारि शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको सहायक प्रधानाध्यापक रिजालले बताए । विद्यार्थीहरुले आफ्ना अभिभाबकलाई दर्शन ९ ढोग ० गरेर विद्यालय आउने गरेका छन् ।
नयाँ सोंच, सिप र प्रविधी निजी विद्यालयका लागि अपरिहार्य छ ः नाम्स सञ्चालक, प्रदिप भुसाल नाम्सले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरमा पु¥याएको योगदान र आगामि योजनाका बिषयमा प्रशान्त वलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् विद्यालयका प्रबन्धक निर्देशक प्रदिप भुसालसंग गरेको कुराकानिको सारसंक्षेपः
तपाई जस्तो युवा पुस्ताको उद्यमी शिक्षा क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो ?
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागी युवाहरुको मुख्य भुमिका रहेको हुन्छ । अहिले नेपालका युवा पुस्ता सबै पलायन भईरहेका छन् । हामी जस्ता युवाहरुको योगदानबाट मात्रै नेपालको शिक्षा क्षेत्र विकास हुनसक्छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने हरेक विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न हामी युवाहरु एक जुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यहि अनुरुप हाम्रो युवा टिमनै छ । उहाँहरुकै सहयोगमा द न्याम्स विद्यालय मार्फत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागी लागीरहेको छु ।
तपाईले विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदा स्थानिय निकाएको सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
विद्यालय सञ्चालन गरिरहदाँ हामीले टोखा नगरपालिकाबाट धेरै सहयोेगहरु पाइरहेको छौ । विषेशतः वडा।न।९ बाट हामीलाई पूर्ण सहयोग रहने गरेको छ । स्थानिय निकायहरु बेला मौकामा विद्यालयमा अनुगमनका लागी आउनुहुन्छ । प्रतिनीधिहरुको अनुगमन र नियमित आउने रचनात्मक सुझावहरुले पनि हामीलाई अझै धेरै उर्जा थपेको महसुस गरेको छु ।
पछिल्लो समयको परिस्कृत शिक्षा प्रणाली सम्बन्धि तपाईको धारणा के छ ?
कुनै पनि राष्ट्रको विकास, त्यस राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा निती कार्यान्वयनले तय गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रप्रति वर्तमान सरकारले लिईरहेको कदम र शैक्षिक संस्थाहरुले देखाएको तदरुपताले यो परिस्कृत शिक्षा प्रणाली प्रति म आशावादी छु ।
विद्यालयहरुको नयाँ भर्ना अभियान चलिरहदा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई कुन विद्यालय रोज्ने भन्ने समस्या आउने गरेका छन्, उहाँहरुलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
मैले हरेक विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई नयाँ भर्ना अगाडि विद्यालयको नतिजा, त्यहाँको टिम र शैक्षिक वातावरणलाई विष्शेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । विद्यागथृिले कति ल्यायो भन्द पनि कति सिक्यो र के सिक्यो भन्ने कुरालाई स्थान दिने विद्यालय छान्नपर्छ । किताबि ज्ञान मात्र नभई संस्कार र व्यवहारिक शिक्षा दिने विद्यालयले विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्छ । आफ्नो टोल छिमेकमा रहेको विद्यार्थीहरुमा देखिएको व्यवहारनै उसले विद्यालयबाट पाएको शिक्षा हो भन्ने कुरालाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि विद्यालय रोज्न कठिन छैन ।
‘डी प्लस’ को रजिस्ट्रेसन नरोक्नू : सर्वोच्च
शिक्षा आर्जन गर्न जातले रोक्दैन : अखिल क्रान्तिकारी नेता, दुर्गा विक